Umfazi abo watshata a horse: intimate iifoto ka-uthando phakathi umfazi kwaye horse - Bradl
Umfazi abo watshata a horse: intimate iifoto ka-uthando phakathi umfazi kwaye horse – Bradl
Girls uthando amahashe, boys ukudlala name, umqathango, inkampani uba kwaye codified, pop yenkcubeko imifanekiso kuba decades, ukuba akunjalo nkqu kuba centuries, ngokuzingisileyo. I-umfoti Wilma hurricanes njengokuba umntwana yayiyenye abo”horse girls’, iindlela isihloko yabasetyhini kwaye amahashe njengoko i-omdala kodwa ngokucacileyo differentiated. Umfazi lowo watshata a horse yakho ngoku kanjalo njengokuba incwadi ipapashwe a umfanekiso uthotho i-Finn sheds ukukhanya kwi magical unxulumano phakathi komntu horse kwaye ezahlukeneyo qukuqela a friendship explores, kusoloko kukho ngaphezulu enamandla, ngokusekelwe intlonipho enzulu ngamnye enye. Sinawo -Yeminyaka ubudala, egama imifanekiso sele Aseyurophu kwaye Asia baba ekhutshwe, malunga fascination ye-yezilwanyana, ncinci kakhulu ponies, kwaye phantse unobumba stereotypes malunga ubudlelwane phakathi umfazi kwaye horse wathetha. Ucinga ukuba zenza umahluko kwi-ubudlelwane phakathi kwabasetyhini kunye amahashe kwaye abantu kwaye amahashe. Andiqinisekanga ukuba ngaba kufuneka kubekho absolutely a yenza umahluko omkhulu. Amadoda nabasetyhini bekunye ukwakha kakhulu vala bond nge horse. Kwesinye isandla, kukho le iron umfanekiso lone cowboy, egama kuphela loyal companion, lakhe horse. Kwesinye isandla, umzekelo, baninzi young girls bakholwayo ethile ubudala, ukuba mnye kuphela oqonda kuni, ingaba yakho oyintanda Pony. Mna wakhulela kunye ezintathu abancinane oodade kwaye ndine photographed yiyo rhoqo girls nabafazi, kwaye kwimeko le projekthi, ezi abafazi share zabo bizarre ehlabathini kunye ezi ezinye izidalwa. Njani yaye le projekthi kuza malunga.
Ezininzi kakhulu unfulfilled lwabantwana abancinane stuck kukho inqwenelela kwi apho. Mna akhange na dreamt ka-njengomntwana, yiya riding, ayikwazi ke kodwa. Njengoko i-omdala, mna anayithathela ithathwe izifundo kwaye waba thrilled. Mna anayithathela waqala ukwenza kum worry malunga indlela horse kwi-unguye njengokuba Uphawu isetyenziselwa, ‘ve ukufunda abaninzi Kuthi apho amahashe idlalwe indima enkulu kwaye kuba nam imiselwe ku abanye incopho kunye umbuzo njani thina zithungelana njengoko humans ngezi izilwanyana. I-horse ikhangeleka kuba uhlobo jonga ukuze uqiniseke ukuba abantu bona a Kubonisa yakho mna ukuba kufuneka bafune ngenye indlela kuba ufikelelo. Ngexesha elinye, jonga lo ngu-eba ngaphezulu blurred, instrumentalized, umntu kunye yezilwanyana iphatha kuyo. Imifanekiso bonisa abafazi kunye zabo ukuthelekisa amahashe okanye ufuna anayithathela sele besebenza Models. Okokuqala iifoto, akunyanzelekanga ukuba ube poses, kodwa kwaba kakhulu isebenziseke, yiyo ndine Abafazi bafuna abathe wachitha enkulu imimandla yayo ubomi kunye amahashe, kwaye kunye nabo abantu abaqhelekileyo. Abaninzi iifoto ndenza kwi-USA, kwaye fantastic umbutho woomama, zahlangana girls, umzekelo, ukuba sat kwi horse ke, emva kokuba ungakwazi nkqu iqhube kakuhle. Nomngeni kunye amahashe yi-e-United States ngu-hluke kakhulu kunokuba omnye ndiyazi ka-riders ukusuka wam ekhaya. Kwi-Finland asinaphawu ndizakukubona ngakumbi njengoko a Hobby, siya kusebenza kunye nawe. Mna weza kuwo ngayo kwimeko nganye, kwi-insanely ziqinile, kwi omabini ka-respectful budlelwane nabanye phakathi kwabasetyhini (nabantu) kunye amahashe, ukuba ukhulele kunye nokusuka ngamnye ezinye ndafunda. Kubaluleke ngenene nzima, koko ke, ukuba uye mazwi. Waphila i-mhlophe Pony ukuba kufuneka kwi Couch photographed, eneneni, kunye umfazi kuyo indlu.
Silifumene nabo kuba umfanekiso
Kubalulekile i-Arabella, miniature horse okokuba waye kanjalo real dwarf.
Incredibly ncinci kakhulu
Ndino ngenene lucky ukuba ndandisele besebenza baqeqeshwe amahashe baba nako kulala phantsi kwi umyalelo. Kunjalo, kubalulekile uhlobo a cliché, kodwa: eneneni, nayo codified, pop yenkcubeko imifanekiso ikakhulu of young girls, nto leyo wathi kuba vala udibaniso amahashe.
Kutheni ucinga ukuba oku kunjalo
Ewe, kuyinto cliché, kwaye ngamanye amaxesha mna ukulifumana phantse ulwim kangakanani le friendship phakathi kwe-girls kwaye amahashe, juvenile Icala, abalindi ngasesangweni phambi unomdla boys okanye zabo sexuality. Oku kunjalo, kokukhona intsonkothile. Kukho le esinenkathalo Kwinto, kodwa kanjalo imisebenzi mutually. Amahashe ingaba kakhulu efikelelekayo, abo bamkela wena njengoko ungumnini, kwaye yakho yesitalato ubuso kusenokuba kakhulu reassuring. Kwesinye isandla, udinga abantu ukuba calms wena kukhokelela oko kusenokuba kuba umbutho woomama indlela ukufumana ngokwakho kwi-ephambili Indawo ukuba sizame. Kunye enkulu izidalwa ukuba basebenze kunye, amava kunye, izinto oko kungabangela ukuba bona ihlabathi kwi-hluke kakhulu indlela bona, njenge horse
← Young-umntu - partnerships - Omnye, Slim, kwi-Baden-Württemberg kwimakethi classifieds
Apho Unako ndiya Kuhlangana Umkhosi Umntu. Indian dating site Hetalia →